Andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra
“Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy; ary hosoratako eo aminy ny anaran’Andriamanitro sy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin’Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao” Apôk. 3:12
Mety ho mahafinaritra ny fahitantsika ny nisehoan’i Jesôsy araka ny maha-Izy Azy tamin’i Jaona, fa toa hafahafa kosa raha miresaka mivantana amin’ny fiangonana Izy. Tokony ho tadidintsika anefa fa ny fiangonana, na dia maro fahalemena sy kilema aza, dia tena ifantohan’ny sain’i Kristy. Mitsinjo azy tsy miato Izy ary amim-piahina fatratra, ka mampahery azy amin’ny Fanahiny masina. Amin’ny maha-anisan’ny fiangonany antsika, moa mamela Azy hanohina ny saintsika ve isika sy hiasa amin’ny alalantsika mba ho voninahiny? Horaisintsika ve ny hafatra alefany amin’ny fiangonana? Andeha hanapa-kevitra ho anisan’ireo izay hitsena Azy amim-pifaliana amin’ny fiaviany, fa tsy ho anisan’ireo izay “hitomany Azy” (Apôk. 1:7). Andeha hatao azo antoka ny famonjena antsika amin’ny fankatoavana ny hafatra izay omeny ny fiangonany.
Mitondra teny fampaherezana ho an’ny fiangonana i Kristy: “Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany. Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao. Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy; ary hosoratako eo aminy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin’Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao” Apôk. 3:10-12.
Andeha hiezaka mafy hahazo ny fahafaha-miditra ao amin’ny fanjakan’ny tompontsika. Andeha hianatra amim-paharisihana ny filazantsara dia izay nasehoan’i Kristy tamin’i Jaona tany amin’ny nosy Patmôsy, ny filazantsara izay antsoina hoe “ny fanambaran’i Jesôsy Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy, mba hasehony amin’ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana; ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’i Jaona mpanompony” Apôk. 1:1; Aoka hotsaroantsika mandrakariva fa “sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin’ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny” fa antomotra ny andro. (and.3) - ST,04 Febroary 1903.